Havasi miners zvose vachapona mutengo rutapudzo bitcoin - Blockchain News
Kukadzi 6, 2018 arun
Havasi miners zvose vachapona mutengo rutapudzo bitcoin
How zvikuru vanofanira bitcoin mutengo kuti kuchera zvakare kunova zvisingabatsiri?
A 70% donhwe mutengo bitcoin pakati December kunova akaderedza profitability pakuchera. With yanhasi mutengo pamwero, richidonhera kushoma pakati $ 6,048, chete miners kupfuura anogona kugara yerera. Asi kuongorora Bloomberg zvinoratidza kuti kunyange pakati zvikuru vatambi havasi vose vanogona kurarama.
nhasi, 67% of kuchera-simba iri kusimbiswa mumaoko mumadziva mana: BTC.com, AntPool, SlushPool uye BTC.top. Asi Bloomberg dzezvematongerwo Tim Kulpan inoti: “Kana usiri boka kuti Rinotarisira uchitsanya mugodhi zvivako kutengwa Wholesale mitengo, ipapo Ungangove iwe havachavimbi mari.” December kwakaita simukai kwakawedzera musika yemigodhi kubudikidza 40%, izvo zvakazoita kuti kusaenzana wegadziriro: maererano Blockchain.info, zvanga zviri 51% zvakaoma dzokubvisa misa.
Yakura zvose kunzwisisa Masvomhu uye uwandu simba vaparadzwa. Kana bitcoin vakamira 50-zuva chaifamba avhareji $ 13,200, zvino kuitika kunzwisisa uye uwandu hashes, paavhareji mucheri pamwe midziyo yakanaka aizopiwa $ 80 pavhiki (asi mukuru zvokushandisa, rezasi kunobatsireiko). zvisinei, kunyange zvemberi bitcoin-migodhi zvivako havaridziviriri pamusoro pangozi yokurasikirwa mari, kana mutengo anodonhedza zvikuru, uye mucheri achagara nemambure: ari miners varasikirwa kutanga nemutengo achitandadza $ 6,800.
Kana mutengo rukasafashukira, ipapo paavhareji mucheri acharasikirwa $ 3 pavhiki. Mining madziva, akadai AntPool, anogona kuramba akanaka munharaunda, asi avo unotiranga achava 90% kuvatumwa ane 50-zuva chaifamba avhareji $ 13,200.
Tim Kulpan modeled chete, yake mafungiro, mamiriro ezvinhu, umo migodhi achaponesa kunobatsira: Kukura bitcoin pamwe fanira kubudiswa chikamu miners kubva mutambo kuti kuderedza makwikwi. The dzezvematongerwo ndechokuti chokwadi kuti vatori yanhasi zvose havazokwanisi kudzivisa marwadzo: kana mumwe achasunungura “chikepe yemigodhi” kubva kwayo uremu, kana munhu wose nyura.
Kana iwe uri munhu private munhu uye vanoda Mining Bitcoin nevamwe Cryptocurrency, zviri zvakanakisisa kuzviita kuburikidza Cloud Mining, kubhadhara mari vanachiremba uye vabatsirwe kuti makambani makuru vanowana. Heano pamusoro 3 Makambani nokuti Cloud Mining: Hashflare, IQMining kana Genesis Mining
bitcoinmisa chenigore kucheramucherikucheranhau
Previous Post:Exchanges Crypto mana chete kuteerera zvinodiwa South Korean regulator
Next Post:New Technologies Vari Kusvika Kwamungaita Bitcoin kuti Scalability
pamusoro 5 Cryptocurrencies in 2019 from The Altcoin Buzz Team